एक वयस्क पुरुषले एक रातमा कति पटक सम्म सेक्स गर्न सक्छन - MONGOL KHABAR
एक वयस्क पुरुषले एक रातमा कति पटक सम्म सेक्स गर्न सक्छन
पछिल्लो समय विश्वमा यौन सम्बन्धी कयौं शीर्षकमा रिसर्च हुन थालेका छन् । सेक्सका मामिलामा जानकार तथा विज्ञहहरुले सर्वसाधरणहरुसँग धारण बुझेर बिभिन्न तथ्यहरु सार्वजनिक गर्ने गरेका छन् ।
विज्ञहरुको अनुमानलाई हेर्ने हो भने एक वयस्क पुरुषले एक रातमा कति पटक सम्म सेक्स गर्न सक्छन् भन्ने अझै पनि एकिन भन्न सकिन्न । तर, यौन सम्पर्कलाई खानपानले पनि असर गर्ने हुँदा ठ्याक्कै यति नै पटक हुन्छ भन्ने हुँदैन ।
औषतमा भन्ने हो भने एक रातमा ४ पटकसम्म राम्रो यौन सम्पर्क हुन सक्ने अनुसन्धानकर्ताहरुले बताएका छन् ।एक स्वस्थ तथा वयस्क पुरुषले यौनको चरम सुखानुभोगको आधार मा उसको यौनको मात्रा तथा गन्ति गर्न सकिन्छ ।
पुरुषहरु मदिरा सेवन गरेको अवस्थामा यो अवस्था दोहो¥याउने गरेको पाइन्छ ।अन्य अवस्थामा यो मात्रा कति हुन्छ त अण्डकोष अति नै संवेदनशील हुन्छ, औंलाका टुप्पाहरुले अण्डकोषमा बिस्तारै प्रेमस्पर्श गर्नाले, जिब्रोले अण्डकोषलाई स्पर्श गर्नाले र सामान्य सोही अंगलाई हातले हलचल गराउनाले तपाईंले तपाईंको पुरुष पार्टनरलाई चरम उत्कर्षमा लैजान सक्छन् ।
पुरुषले सेक्सका बारेमा धेरै कुरा गर्छन् भने महिलाले सेक्सको चाहना धेरै राख्छन् ।यसको कारण तल दिइएको छः
१. यसले शारिरिक सन्तुष्टि प्रदान गर्छः
२. आफ्नो बारेमा राम्रो कुराहरु सोच्नुः
साधारणतया, राम्रो सेक्स भनेको तपाईं दुबैजना निकै आनन्द लिइरहनु भएको छ र दुबैजना संलग्न भइरहनुभएको छ भनेर बुझिन्छ । यसले तपाईंलाई आफ्नो बारेमा राम्रो कुराहरु सोच्न मद्दत गर्छ र आत्मबिश्वास बढाउँछ ।
एकजना गृहिणीका अनुसार, ‘दिनभरीको काम पछि जब मेरो श्रीमान् अफिसबाट फर्कनुहुन्छ, तब हामी एकअर्कासँग गोप्य समय बिताउछौँ । यसले मेरो आत्मबिश्वास बढाउन सहयोग गर्छ । आफ्नो श्रीमान्लाई सन्तुष्ट पार्न सकेकोमा निकै खुसी हुन्छु । केहि काम गर्नको लागि यसले प्रेरणादायी भूमिका पनि खेलेको हुन्छ ।’
३. आफ्नो पुरुषसँग नजिक ल्याउँछः
शरिरिक सामिप्यताले अक्सिटोसिन हर्मोन निकाल्छ जसलाई लभ हर्मोन पनि भनिन्छ ।रिलेसनसिप एक्सपर्ट बन्धना मित्राका अनुसार सेक्सलाई जोडिहरुले कहिले पनि क्याजुअल्ली लिनु हुँदैन ।
सम्बन्धलाई टिकाइरहन र दिगो राख्नाका लागि यसले बलियो भूमिका खेलेको हुन्छ । आफ्नो पार्टनरसँग धेरै पटक सेक्स गर्नाले सम्बन्ध बलियो र दिगो हुने कुरा साँचो हो ।
४. नचाहिने इमोसन हटाउँछ, तनाव घटाउँछः
तीस मिनेटको सेक्सले ८५ भन्दा बढि क्यालोरी नष्ट गर्न मद्दत गर्छ । हामीले धेरै पटक सेक्सले क्यालोरी नष्ट गर्ने कुरा पढिसकेका छौँ र यो कुरा पुष्टि पनि भइसकेको छ ।
‘म तिम्रो श्रीमानकी प्रेमिका हुँ तर ऊ धोकेबाज होइन’ भन्नेलाई श्रीमतीको जवाफ